Akụkọ - Kedu ụdị akwa ụgbọ ala dị mfe nhicha?
Dị iche iche ihe na Njirimara ụgbọ ala n'ala ute bụ dị iche iche na-asa ụzọ.
Isi ike nke ịsa ahụ dịkwa iche, ụgbọ ala ụgbọ ala ugbu a jikọtara ya na ihe ndị a dị iche iche: kapeeti, ihe mgbochi ụgbọ ala rọba, ihe mkpuchi ụgbọ ala pvc na akwa TPE / TPR.
Ka anyị kọwaa ihe dị iche na ịsacha usoro nke ụgbọ ala ute:
Kapeeti kapeeti : ọtụtụ ụlọ ahịa ụgbọ ala ga-enye kapeeti na ụgbọ ala mgbe ịzụrụ ya, ọ ga-adaba n'ụgbọala ahụ, ọ ga-ama mma na mbụ, mana mgbe ọnwa ole na ole gasịrị, ọ ga-adị ọcha nke ukwuu, ọ na-esikwa ike ihicha nke ọma , ọ bụghị mmiri na-adịghị, na ịkwesịrị ichere na ọ kpọọlarị iji weghachi ya n'ụgbọala gị, ọ naghị adị mfe ịme ya.
5D Lekwanyere Akpụkpọ anụ omenala ụgbọ ala ute, Ọ na-ewu ewu ruo ọtụtụ afọ, n'ihi na akpụkpọ anụ ahụ na-ahụ ụgbọ ala okomoko, Ọ na-amasịkarị ndị nwe ụgbọ ala na afọ ndị gara aga. A na-egbutu ya na ụdị ụgbọ ala ya, yabụ ọ dabara adaba n'ụgbọ ala ahụ ma ọ nwere ike imepụta na MOQ dị ala, ọ bụ dị nnọọ cutted site igwe na dụkọta site ọrụ, niile ụgbọ ala ute ụlọ ọrụ mmepụta nwere ike na-emepụta niile ụgbọ ala ụdị. Ma ihe mkpuchi ụgbọ ala PVC dị mfe inye ụfọdụ isi na-egbu egbu n'oge okpomọkụ ， ọ ga-agbari mgbe ọ sachara ya oge ụfọdụ. Ọ bụ mmadụ ole na ole na-eji ya ugbu a.
Matsgbọ ala ụgbọ ala Rubber, uru kasịnụ ya bụ ọnụ ala, ma ị nwere ike belata ya ka ọ daba n'ụgbọ ala gị, mana ihe a anaghị eme ka gburugburu ebe obibi dị mma, ma mgbe ị jiri ya ọnwa ole na ole, ọ ga-agbawa, nke nnyapade, sie ike, dị nro, ntụ ntụ, acha odo odo, nke nwere ntụ, ọ ga-adị ka ihe ruru unyi. Yabụ, anyị anaghị atụ aro iji ihe eji eme ụgbọ ala ihe a ugbu a.
Ihe omuma ohuru ohuru TPE, TPR ka eji eme ihe n’ime ala. Ma o nweghi isi na oke okpomọkụ, recyclable, mgbochi amị amị, iyi na-eguzogide, njirimara mmiri. N'ihi na ihe onwunwe TPE enweghị mkpa ọ bụla mgbakwunye.
Na TPE matsgbọ ala isgbọ ala bụ 3D imewe, ọ nwere udidi n'elu ga-melite esemokwu ike na gburugburu elu n'akụkụ nwere ike igbochi mmiri stains n'akụkụ leakage, chebe ụgbọ ala n'ime. Mmetụta nke TPE car car bụ na ọ dị mkpa ịzụlite ebu maka ụgbọ ala ọ bụla dị iche iche, ọ ga-ewe ogologo oge ma were nnukwu ego iji zụlite ya. Y’oburu n’inwere ike ichota ute ugbo ala ichoro n’ime ihe TPE di n’ahịa, egbula oge itule ya, n’ezie i gha ere ya nke oma.
Karịsịa, akwa ụgbọ ala TPE na TPR dị mfe dị ọcha ma bụrụ nke kachasị mma maka ezinụlọ nwere ụmụ, ọ nweghị nsogbu na ahụike.
Will ga - echekwa oge ịsa TPE car car, naanị ihe dị ka nkeji abụọ ka ịsacha ya.
PEgbọ ala TPE bụ ihe kachasị mfe nhicha ụgbọ ala.
Post oge: Feb-09-2021
Olee otú iji ala ụgbọ ala gị ute maka 20 yea ...